Zvekudzivirira Kubata pamuviri & Chengetedzo Archives • Zivo SUCCESS
In-Depth Vechidiki, Kutenda, uye Kudzivirira pamuviri muFrancophone Africa
Oumou Keita Chivabvu 24, 2022
Mune francophone Africa, vechidiki vane makore 15–24 vane dambudziko rekuwana kuronga kwemhuri kwemhando yepamusoro (FP) ruzivo uye masevhisi. Pamusoro pe, vane chiyero chepamusoro chekurega kubata pamuviri kupfuura vakadzi vakwegura uye vanonyanya kunetseka kune zvakashata ...
chat_bubble0 Comment kuonekwa899 Views
In-Depth Vechidiki, Chitendero uye Kudzivirira pamuviri muFrancophone Africa
MuAfrica inotaura chiFrench, vechidiki vakura 15 pa 24 makore ane dambudziko rekuwana ruzivo nerubatsiro rwekuronga mhuri (PF) quality. Uyezve, vane mwero wepamusoro wekurega kubata pamuviri ...
chat_bubble0 Comment kuonekwa1109 Views
chat_bubble0 Comment kuonekwa3002 Views
chat_bubble0 Comment kuonekwa11284 Views
chat_bubble0 Comment kuonekwa7953 Views
Zvishanu Zviratidzo zveMusika zvinoratidzira iyo Hormonal IUS Ichaenda
Kendal Danna Gunyana 18, 2020
Iyo hormonal intrauterine system (IUS), inozivikanwawo seLNG-IUS, chirongwa chekudzivirira pamuviri chinoshanda zvikuru chinoshanda kwenguva refu (LARC) nzira. PSI inogovera zviratidzo zvishanu zvemusika zvinoratidza kuti mahomoni IUS kuwana ichabvisa makore gumi aya, ...
chat_bubble0 Comment kuonekwa2579 Views
Quick Read Kutsigira Kuwana Kuzvidira Kwehutano hwekubereka Kuchengetedza muEast Africa
Alex OmariSarah KosgeiDiana Mukami Chikunguru 1, 2020
Vechiduku nevachiri kuyaruka vanoda kunyatsofungwa. Chinyorwa ichi chinoburitsa basa rakakosha revanoita sarudzo uye tekinoroji varairidzi mukusimudzira kuwanikwa kweRH masevhisi nevechidiki panguva yeCOVID-19..
chat_bubble0 Comment kuonekwa4871 Views
In-Depth COVID-19: Nyika Ichaita Sei Mwedzi Mipfumbamwe Pamberi?
Tamari Abrams Chikumi 25, 2020
COVID-19 yakasimudzira hupenyu hwedu uye, zvichida zvakanyanya kukosha, zvizhinji zvefungidziro dzedu pamusoro pezvazvinoita panyika. Vanamazvikokota mukuronga mhuri vari kunetsekana zvikuru kuti kuvhiringwa kwegadziriro yegadziriro dzokugovera dzokuronga mhuri kungaguma ...
chat_bubble0 Comment kuonekwa3377 Views
Quick Read Zvitoro Zvezvinodhaka: Chakakosha Kuwedzera Kuwana Kuronga Kwemhuri
Tracy Orr Chikumi 18, 2020
Vanopa uye boka diki revashandirwi vari kushanda kuti vanzwisise nzira yekutsigira zvakanyanya uye nekubatanidza zvitoro zvezvinodhaka sevachengetedzi uye vakavimbika vekuronga mhuri.. Kuwedzera nharaunda yakakura yevashandi vekuronga mhuri ' ...
chat_bubble0 Comment kuonekwa4008 Views
Data Chii Chinogoneka kune Zvitoro Zvezvinodhaka Kuvandudza Kuwanika kune Majekiseni?
Victoria Lebrun Chikumi 9, 2020
Majekiseni ndiyo inonyanya kufarirwa nzira yekuronga mhuri muUganda asi, kusvika munguva pfupi yapfuura, aipihwa chete nevashandi vehutano munharaunda uye munzvimbo dzehutano nezvipatara. Mukupesana ne, nyika yacho 10,000 zvitoro zvezvinodhaka, izvo zvinopa ...
chat_bubble0 Comment kuonekwa4089 Views